Hopitaly atsimo - siansa sy teknolojia teknolojia Shenzhen Doneax CO., LTD
Pimped Xenon famonoana otrikaretina
Famonoana otrikaretina ultrasound Probe
Trano famonoana jiro maivana
Niorina tamin'ny 1941, ny Hopitaly atsimo no hopitaly voalohany mifandraika ary ny oniversite fitsaboana voalohany amin'ny klinika an'ny University of Southern Medical (teo aloha ny oniversite ara-pitsaboana miaramila). Izy io dia hopitaly feno grady feno 3A mitambatra fitsaboana, fampianarana, fikarohana siantifika ary fisorohana ary fikarakarana ara-pahasalamana. ny hopitaly ParknShop andiany voalohany ao amin'ny firenena.
Misy fandriana 2225 ao amin'ny hopitaly, ary fifehezana matihanina 52 no napetraka ao amin'ny hopitaly. Ny fifehezana voalohany amin'ny fitsaboana klinika dia ny mari-pahaizana mari-pahaizana momba ny mari-pahaizana doctorat sy ny tobin'ny fikarohana postdoctoral. Ny fitsaboana anatiny (aretina amin'ny rafi-pandevonan-kanina) no fitsipi-pifehezana lehibe ho an'ny firenena, ary ny fandidiana (orthopedic) no fitsipi-pifehezana lehibe ho an'ny firenena. Departemantan'ny Gastroenterology, Gynecology, Obstetrics, Orthopedics, Laboratory Laboratory, Pathology, Hematology, Neurosurgery, Stomatology, Nefrology, General fandidiana, Oncology, fitsaboana amin'ny plastika, ny fandidiana plastika dia zava-dehibe indrindra amin'ny klinika nasionaly, miaraka amina 31 manan-danja amin'ny klinika any amin'ny faritanin'i Guangdong. Izy io dia manana Laboratoara manan-danja an'ny fanjakana amin'ny fisorohana sy fitsaboana ny tsy fahombiazan'ny taova sy ny Ivotoerana fikarohana ara-pitsaboana ara-pahasalamana ho an'ny aretina mitaiza voa. Ny hopitaly koa dia nitarika ny fametrahana ny "Base demonstration Management Health", "Li Kezhong Medicine Academy School Heritage Base" ary "Center fitsaboana ireo aretina sarotra sy sarotra amin'ny fitsaboana sinoa fahizay" manerana ny firenena. Niorina ny Ivontoerana Nefibôlôjika any Guangdong sy ny Ivon-toerana atsimon'ny aretina amin'ny fandevonan-kanina.
Ny hopitaly dia namorona sehatra fitsaboana tombony valo amin'ny famaritana sy fitsaboana aretina mandevon-kanina, aretin'ny voa, hépatite, fanafody perinataly, Diagnostika feno ary fitsaboana ny fivontosana, fitsaboana trauma, microneurosurgery ary famindrana sela sy taova, ary koa sehatra teknolojia ara-pitsaboana efatra an'ny fitsaboana sela, tsimokaretina endoskopika manararaotra kely indrindra, fitsaboana vonjimaika ary fitsaboana ary fitsaboana aretin-koditra sy fitsikerana.
Tamin'ny 8 septambra 2020, nomena ny mari-boninahitra "Vondrom-pirenena mandroso ho an'ny ady COVID-19" avy amin'ny Komity foibe CPC, ny filankevi-panjakana ary ny vaomiera miaramila foibe ny vondrona
Orinasa: Shenzhen Doneax Science and Technology Co., Ltd.
Adiresy: Road Industrial, Shilong Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen